I-ALOGEAR - I-Quanzhou Omi Apparel Co, Ltd
Inhlanganisela enhle yenayiloni ehlala isikhathi eside, engasindi kanye nokunwebekayo, okuthophayo okwenziwe nge-spandex kwenza lawa ma-leggings abe ngawokuhamba phambili kuwo womabili la mazwe. Bazizwa bathambile nje futhi bathambile njengokotini wokugqoka okungajwayelekile kanti futhi bakhipha umjuluko wokuzivocavoca. … Ama-leggings enayiloni-spandex ayindlela yokuhamba.
Inayiloni Spandex ihlukaniswa njenge-fiber elastomeric noma nje i-fiber noma impahla enganweba ngaphezu kwe-500% ngaphandle kokuphuka. Isimanga esisha sale super-fiber eyakhiwe ngobuchwepheshe yikhono layo lokuphinda libuyele ngosayizi waso wokuqala lapho lingasetshenziswa. Inayiloni Spandex iyindawo enkulu esikhundleni senjoloba ezingutsheni ngoba inokunwebeka okukhulu okungabuyela kalula esimeni sayo sokuqala. Izingubo ezenziwe nge-Nylon Spandex zikhululekile, noma kunjalo, ziqinile. Indwangu yeNylon Spandex ilula kakhulu uma iqhathaniswa nenjoloba yemvelo elula esikhumbeni.
INylon Spandex, i-anagram yokwanda, ekuqaleni iqala ukusebenzisa njengezingubo ezikhethwayo zamaqhawe amakhulu njengoSuperman noBatman, kodwa kungekudala yamukelwa ngabasubathi bezwe lethu lanamuhla. Ababhukudi, abavocavoci bomzimba, nabadlali bezigcawu zokugqoka bagqoka iNylon Spandex ukuze ibonakale kahle. Ngisho nabasubathi nababhukudi, abadlali bekhilikithi bethu nabo bagqoka izingubo zangaphansi zeNylon Spandex enkundleni.
Ngisho nasezimpahleni zezemidlalo, indwangu yeNylon Spandex inezinzuzo eziningi zenye injongo futhi. Ngaphandle kwekhono layo lokuphinda libuyise isimo salo sokuqala uma lingasetshenziswanga futhi lenziwe, iNylon Spandex iyindwangu entofontofo ngokweqile. Iyasinda futhi ithambile futhi ayikwazi ukumelana namafutha omzimba noma izifutho. Kuyindwangu emelana nokuhuzuka, inqwaba, kanye nendwangu emile.
Inayiloni Spandex ifike yaphuma emfashinini eminyakeni edlule ngezindlela ezahlukahlukene. Isibonelo, amabhulukwe eNylon Spandex ayethandwa kakhulu ngawo-1980. INylon Spandex ibilokhu iyinto ekhethwayo yezingubo zemidlalo selokhu yatholakala. Nakhu okunye ukusetshenziswa okuyinhloko kweNylon Spandex.
Inayiloni Spandex isetshenziswa kakhulu kuzimpahla zokubhukuda. Izindwangu zangaphansi, imichilo kaBra, amasokisi nawo ancamela ukuba nezinto zeNylon Spandex. Ezinye izesekeli zemidlalo ezinjengezikhindi zomjikelezo, isudi yeWrestling, iNetball, nesudi yevolibholi nakho kukhethwa ukuba nakho kwendwangu yeNylon Spandex. Ezinye izinto ezilungiselelwe kusuka kuNylon Spandex zifaka ama-wetsuits, amagilavu, ama-Diapers, amasudi wokubamba ezinyakazayo namasudi eZentai, amabhande, ipayipi lokuhlinza kanye nezingubo zokugwedla.
INylon Spandex iyinsumansumane ethandwa kakhulu yesayensi nayo. Incwadi yamahlaya Abalingiswa bonke bagqoke izingubo zenayiloni Spandex. I-Nylon Spandex bekucatshangwa ukuthi iyizinto ezizayo, ngakho-ke zonke izindaba namahlaya afaka abalingiswa bawo ezingutsheni ze-Nylon Spandex.
Ukuguquguquka namandla ale ndwangu kusho ukuthi ingasetshenziselwa izinhloso ezahlukahlukene. Izikhindi zokuzivocavoca zingenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu kule ndwangu ngoba zivumela umzimba ukuba uphefumule, nemisipha iyanwebeka futhi iyaqina ngesikhathi sokuzivocavoca. Esinye isizathu kungenzeka ukuthi lokho, kukuvumela ukuthi ubheke imisipha ngesikhathi sokuzivocavoca bese uthola amandla ngokubona.
Lapho ukhetha izingubo ze-Nylon Spandex, kunezinto ezimbalwa okudingeka uzigcine engqondweni. Okokuqala inhloso yokuthi umuntu asebenzise ingubo ngayiphi injongo. Ake sithi, uma ufuna amabhulukwe agijimayo, lapho-ke kuzodingeka uthathe isinqumo phakathi kwezingubo zokukhanyisa isibhakabhaka nezingubo ezilula ezilula. Ama-skintight alungele izinsuku ezibandayo nokugijima okufushane njengoba ekugcina ufudumele ngenkathi okuhlukahlukene kakhulu kunakho konke kuhle ezinsukwini ezinelanga nezithambile.